निर्वाचन प्रणाली - विकिपिडिया
Craig Owen Eberhart. goldman
निर्वाचन अथवा चुनाव प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो। निर्वाचनमा जनताका प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्।
प्रतिनिधिहरूका चुनावका अनेक तरिकाहरू हुन सक्छन्। लटरीका टिकट निकालेर नबुझिकन प्रतिनिधिहरूको चुनाव गर्नु एक यस्तो तरिका हो जसको लोकतन्त्रमा कुनै स्थान छैन। अरु तरिकाहरू सामान्यत: निर्वाचनको मतदान प्रणालीमा नैं आधारित छन्,। यद्यपि यी तरिकाहरू पनि पूर्णत: निर्दोष नैं छ्न् भन्ने कुरा होइन; पदप्राप्तिका इच्छुक प्रत्याशी प्राय: मतदाताहरूलाई घूस दिएर अथवा डराएर धमकाएर जोर जबर्दस्तीसित तिनिइहरूको मत प्राप्त गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका अल्पसंख्यक वर्ग उचित प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहन्छन्। राजनीतिक तथा अन्य प्रकारका दल कहिले कहिले चुनावका लागि कुनै अयोग्य उम्मेदवारलाई खडा गर्छन्। यस्तो हालतमा त्यस दलका मानिसहरूलाई चाहे-अनचाहे त्यसैलाई आफ्नो मत दिनु पर्छ। यी दोषहरूलाई हटाउन अथवा कम गर्न र मतदानलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष बनाउनको लागि समय-समयमा निर्वाचनका विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरिएको छ।
२ निर्वाचन प्रणालीका अङ्ग
३ सर्वाधिक मतप्राप्त व्यक्तिको विजय (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट)
३.१ द्वितीय गुप्त मतदान
३.२ वैकल्पिक मत
३.३ कमीहरू एवं उनको टाडा गर्नका उपाय
३.३.१ एकल अहस्तान्तरणीय मत
३.३.२ सीमित मतदान
३.३.३ संभूत मतदान (क्यूमूलेटिव वोट)
४ आनुपातक प्रतिनिधित्व
४.१ एकल हस्तान्तरणीय वोट
४.२ सूची प्रणाली
५ यी पनि दहरूखहरू
६.३ Research papers
यूनानी नगर-राज्य प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको उदाहरण थियो। राज्यको विमर्शकारिणी संस्था (प्रतिनिधि सभा)मा प्रत्येक नागरिक स्वयं आफ्नो प्रतिनिधि हुन्थ्यो। आधुनिक विशालकाय राष्ट्रिक-राज्यमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र व्यवहार्य छैन। आधुनिक राज्यको जनसङ्ख्या नगरराज्यको अपेक्षा धेरै अधिक ठूलो हुन्छ, अत: तिनको आबादिहरूको परस्पर कुनै तुलना छैन सकती। यदि आधुनिक राज्यको प्रत्येक नागरिक स्वयं आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न लागोस् त विमर्शमूलक विधान सभा अव्यवस्था र कोलाहलको स्थल बन गर्नरहोस्गी; त्यसमा न त कुनै प्रकारको विचारविमर्श हो सक्नेछ र न कुनै कार्यको सञ्चालन नैं सम्भव हुनेछ। राज्यको शासन यन्त्र शीघ्र नैं ठप पड जानेछ। यस कारण अचेल प्रतिनिधिक लोकतन्त्र चल्दछन्। अब राज्यका नागरिक (प्रजा) विधानमण्डलका लागि आफ्नो प्रतिनिधिहरूको चुनाव सामूहिक रूपले गर्दछन्। केही देसहरूका नागरिक त यसै प्रकार कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) एवं न्यायपालिका नागरिक त यसै प्रकार कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) एव न्यायपालिका (जूडीशियरी)का लागि पनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दछन्। यी प्रतिनिधि नैं तिनको रदेखि र तिनको हितमा राज्यको सञ्चालन गर्दछन्।
निर्वाचन प्रणालीका अङ्गसम्पादन
कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीका वस्तुत: पाँच अङ्ग थैमर् नभर्रो
(१) निर्वाचनक्षेत्रहरूका निर्धारणदेखि सम्बंद्ध नियम;
(२) मतदाताहरूको अर्हतादेखि सम्बंद्ध नियम;
(३) आशावारहरूको अर्हता र मनोनयन सम्बन्धी नियम
(४) मतदानको विधि र मतपत्र गणना सम्बन्धी नियम; र
(५) निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूका निबटारेका लागि कुनै न कुनै प्रकारको व्यवस्था परन्तु प्रचलित भाषामा निवचिन प्रणालीलाई उपर्युक्त केवल चौथो अंगसम्म नैं सीमित मानिन्छ, अत: यहाँ यसै अंगमा विचार गरिनेछ।
सर्वाधिक मतप्राप्त व्यक्तिको विजय (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट)सम्पादन
"फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" (सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तिको विजय) प्रणाली सबैभन्दा प्राचीन हो। यो प्रणाली ब्रिटेनमा तेह्रौँ शताब्दीदेखि नैं प्रचलित रहेकोछ। राष्ट्रमण्डलका देसहरू र अमेरिकामा मतदानको यही सर्वसामान्य प्रणाली छ। भारतमा लोकसभा एवं विधान सभाहरूका चुनावहरूमा यसै प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई "सरल धेरै मत प्रणाली" पनि भन्दछन्। जुन उम्मेदवारलाई सबैभन्दा अधिक मत प्राप्त हुन्छ त्यही चुनीन्छ।
यो प्रणाली सामान्यत: एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणालीदेखि सम्बद्ध हुन्छ। यस प्रणालीको आलोचनामा तीन कुराहरू कही जान्छन्। पहिलो यो कि यसका अन्तर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त कर्ता आशावार निर्वाचित हुन जान्छ, चाहे निर्वाचक मण्डलका पर्याप्त ठूला समुदायले त्यसको विरुद्ध मत दिए छन्। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्वाचित भएमा पनि त्यो विरुद्ध मत राख्ने भएका बहुसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधि बन्न जान्छ। भारतका १९५२का प्रथम निर्वाचनमा अनेक विजयी आशावारहरूका मामलेमा यही भएको थियो। अर्को कुरा यो छ कि यो प्रणाली ब्रिटेनका समान द्विदलीय परम्पराका नैं अनुकूल हुन्छ परन्तु त्यो भन्दा दुर्बल र अल्पसंख्यक दलहरूको सफाया हुन जान्छन्। त्यसमा विभिन्न प्रकारका अल्पसंख्यक समुदाहरूलाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नैं छैन मिल पाता। तेस्रो कुरा यो छ कि यो प्रणाली प्राय: मतदाताहरूका यस्ता समुदाहरूलाई जसलाई थोरै नैं अधिक बहुमत प्राप्त छ, सदनमा धेरै बढा चढाएर देखिानमा सहायक बन्न जान्छ। संपूर्ण मतदानका अनुपातमा कुनै दललाई पाइने कुल मतहरू द्वारा त्यस दलका जितने सदस्य न्यायत: चुनिनु पर्छ त्यो भन्दा कहीं अधिकचुन्नलागि जा सक्छौं। १९५२का भारतका प्रथम सामान्य चुनावमा यही भएको थियो।
केही राजनीतिक विचारकहरू एवं राजनेताहरूले यो सुझाव दिएका छन् कि जस दलको संमतिदेखि सरकार चलने छ भनें्यसलाई कमभन्दा कम कुल मतदाताहरूको बहुसङ्ख्याको समर्थन त प्राप्त हुनु नैं चाहिन्छ। यसै लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार सुझाये गए छ। पुनरावर्तित गुप्त मतदान-प्रणाली यी सुधारहरू मध्येको एक छ। सबैभन्दा सरल तरीका त्यो छ जसको प्रयोग विधान सभाहरू द्वारा गरिने चुनावमा उदाहरणार्थ, अमेरिकाका दलीय सम्मेलन द्वारा राष्ट्रपति एवं माथिाष्ट्रपति पदका लागि खडा हुने आशावारहरूका चुनावमा, गरिन्छ। शलाका पद्धति द्वारा गुप्त मतदानहरूको शृङ्खला तबसम्म चलती रहन्छ जबसम्म कुनै आशावार पडे भए समस्त मतहरू मध्येको एकान्तत: सर्वाधिक मत प्राप्त छैन गर्न लेता।
द्वितीय गुप्त मतदानसम्पादन
यस अन्तर्गत प्रथम गुप्त मतदानमा कुनै आशावार तब चुना जा सक्छ जब त्यो पडे भए समस्त मतहरू मेदेखि एकान्तता सर्वाधिक मत प्राप्त गर्न ले। यस्तो सम्भव न भएमा नामवापसीका लागि केही समय दिइन्छ। फ्रांसमा यसका लागि एक सप्ताह वा पन्ध्र दिनको समय दिइन्थ्यो। यसका पछि अर्को गुप्त मतदान हुन्छ। यस मतदानमा जस आशावारलाई सर्वाधिक मत प्राप्त हुन्छन् त्यो विजयी हुन जान्छ। यस प्रकार चुनावको परिणाम अतंत: सर्वाधक मत प्राप्त व्यक्तिको विजयको पद्धति (फर्स्ट नजीक्ट द पोस्ट सिस्टम), (अर्थात् द्वितीय मतदान स संपुष्ट प्रथम परिणामको पद्धति)देखि नैं निश्चित हुन्छ। फ्रांसका तृतीय गणतन्त्रका समय यही प्रणाली व्यवहृत हुन्थ्यो। स्पष्टत: भारतमा विधान सभाका निर्वाचन जस्तै ठूला पैमानामा हुने चुनावहरूमा यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिंदैन।
प्रत्येक निर्वाचक आशावारहरूका नामहरूका सामुन्ने मतपत्रमा १, २, ३, आदि अंक लेखेर आफ्नो वरीयताका क्रमको सङ्केत गर्न दिन्छ। प्रथम वरीयताहरूको गणना पहल्लाएर लिए जान्छ। यदि यस गणनामा दुइभन्दा अधिक आशावार आये त जस आशावारलाई प्रथम वरीयताका मत न्यूनतम मिले हुन्छन् त्यसका नाम चुनाव प्रतियोगितादेखि हटा दिइन्छ। यसका पछि मतदाताहरूको द्वितीय वरीयताहरूलाई बचे भए उपयुक्त आशावार वा आशावारहरूमा बाँट दिइन्छ। यस प्रकार निरसन र क्रमिक वरीयताहरूका अन्तरणको प्रक्रिया तबसम्म चलती रहन्छ जबसम्म कुनै आशावार पडे भए कुल मतहरूमा देखि सर्वाधिक मत प्राप्त छैन गर्न लेता।
परन्तु जस्तो कि पुनरावर्तित गुप्त मतदान वा द्वितीय गुप्त मतदान प्रणालीमा हुन्छ उत्पन्न हुने प्रत्येक नयाँ स्थितिका सम्बन्धमा विचार विमर्शका लागि समय ले्दै बार-बार वोट दिनु एक कुरा छ र एक यस्ता चयन परिणामका सम्बन्धमा जसलाई पहिलादेखि ठीकठीक छैन जाना जा सकता मतपत्रमा अंक लेखेर एक काल्पनिक निर्णय व्यक्त गर्न दिनु बिलकुल अर्को कुरा छ। यसमा पूरा संदेह बनाएको रहन्छ कि कुनै मतदाता अन्तिम प्रतियोगितामा प्रत्यक्ष चयनको स्थिति आउनमा पनि यसै प्रकार "क"का मुकाबलेमा "ख"लाई नैं वरीयता देता।
इस प्रणालीलाई बरीयतामूलक मत प्रणाली पनि भन्दछन्। यसलाई सम्भवत: सर्वप्रथम १७७०मा चेवलियर दिए बोर्दाले प्रस्तावित गरेको थियो। १९३०मा लिवरल पार्टिला ब्रिटेनमा यसलाई सर्वाधिक रूपमा स्वीकार गर्न लिने आग्रह गरेको थियो। आस्ट्रेलियामा पनि केही सङ्घीय एवं राज्यीय चुनावहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ।
कमीहरू एवं उनको टाडा गर्नका उपायसम्पादन
"सर्वाधिक मतप्राप्त व्यक्तिको विजयको प्रणाली" प्राय: सदैव नैं सबैभन्दा ठूला दलहरूका नैं अनुकूल र दुर्बल एवं अल्पसंख्यक दलहरूका प्रतिकूल हुन्छ। आनुयातिक प्रतिनिधित्वको सहारा लागि बिना नैं यस प्रवृत्तिलाई टाडा गर्नका लागि केही भनें रीके सुझाए गए छन् परन्तु यी सारा प्रणालिहरूका प्रयोगका लागि बहुसदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र अपेक्षित हुन्छन्।"
एकल अहस्तान्तरणीय मतसम्पादन
इसकी सरलतम विधि यो छ कि प्रत्येक निर्वाचकलाई केवल एक नैं मतपत्र दिइन्छ। मान लिजिये कि कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई चार सदस्य चुनने छन् र कुल १२ हजार मतदाता वोट दिन्छन्। यस्तो स्थितिमा यदि कुनै आशावारलाई २४०१ मतदाताहरूको समर्थन प्राप्त भयो त त्यसको विजय निश्चित छ। विजय दिलाउनने सङ्ख्याको ठेगाना यस सूत्रदेखि लागेको लिइन्छ-
इस सूत्रको आविष्कार डÜपले गरेको थियो यस कारण यसलाई डÜप कोटा भन्दछन्। व्यवहारमा स्थिति यो छ कि डÜपकोटादेखि कम मत प्राप्त कर्ता आशावार पनिचुन्नलिया जा सक्छ।
जापानमा यो प्रणाली १९०० देखि नैं प्रयोगमा आ रहेका छन्।
इसे १८३१मा प्रेडले प्रस्तावित गरेको थियो। ब्रिटेनमा १८६७मा सुधार अधिनियम (रिफार्म ऐक्ट)का बन्नका पछि केही समयसम्म यसको प्रयोग भएको थियो, तब उक्त अधिनियम द्वारा ठूला नगरहरूमा धेरै त्रिसदस्यीय निर्वाचक क्षेत्र बनाएको दिये गए थिए। प्रत्येक मतदातालाई तीन जग्गाहरूका लागि केवल दुइ वोट दिये गए थिए। यस प्रणालीको व्यावहारिक प्रभाव यो पडा थियो कि प्रतिनिधित्वलाई विभाजित गरी दिओस्नका लागि पार्टिहरूमा सौदेबजी हुने लगी र यस्ता आशावार छटने लागोस्, जसको विजयको कुनै सम्भावना थिएन।
संभूत मतदान (क्यूमूलेटिव वोट)सम्पादन
यो प्रणाली १९५३मा प्रकाशमा आयी। यसमा मतदातालाई चुनाव क्षेत्रमा जति जग्गाहरू हुन्छन् त्यति वोट दे दिइन्छ र त्यसलाई यसको स्वतन्त्रता हुन्छ कि त्यो चाहे त आफ्नो सारे वोटहरूलाई कुनै एक आशावारका पक्षमा डाल दे अथवा आफ्नो इच्छानुसार अन्य आशावारहरूलाई बाँट दे। यस प्रणालीमा मतदाताहरूलाई अधिक महत्त्व प्राप्त हुन जान्छ।
कहिले कहिले अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्राप्त गरिन्छ। अङ्ग्रेजी शासनकालमा भारतमा यही गरिएको थियो। मुसलमान मानिस हिन्दुहरूदेखि अलग आफ्नो प्रतिनिधि चुनन्थे। यो पनि हुन सक्छ। कि अल्पसंख्यकहरूका लागि केही जग्गाहरू सुरक्षित गर्न दिए जाऐं जस्तो कि भारतमा परिगणित जातिहरू एवं कबीलोका लागि गरिएको छ।
सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तिको विजय प्रणालीको अनुसरण सामान्यत: एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा नैं हुन्छ जब कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका लागि बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षित हुन्छन्। एक नैं जग्गा आनुपातिक रूपमा विभाजित छैनको जा सकती। कुनै निर्वाचनक्षेत्रमा प्रत्येक आशावारका लागि अथवा आशावारहरूलाई खडा गर्न पार्टीका लागि पडे वोटका अनुपातमा नैं जग्गाहरू निर्धारित गरिन्छन्।
आनुपातक प्रतिनिधित्व मुख्यत: दुइ प्रकारका हुन्छन् : (१) एकल हस्तान्तरणीय वोट र (२) सूची प्रणाली। यी दुइटै प्रकारका पनि अनेक रूप हुन्छन्। यी एक अर्कासित पनि मिल्यो दिए जा सक्छ अथवा "फस्र्ट नजीक्ट द पोस्ट प्रणालीमा पनि यिनको मिश्रण गर्न सकिन्छ।"
एकल हस्तान्तरणीय वोटसम्पादन
इस प्रणालीको आविष्कार यूरोपमा आधुनिक दलीय संघटनका विकासका पूर्व नैं भइसकेको थियो। १९ौं शताब्दीका उत्तरार्धमा नैं सार्वभौम मताधिकारको मांग जोरहरूदेखि हुने लगी थियो। यस मांगको प्रतिरोध गरेनन् सकिन्थ्यो। परन्तु राजनेता "बहुसंख्यकहरूका अत्याचार"का प्रति संशक थिए। ती अल्पसंख्यकहरूको तथा तिनको हितहरूको रक्षा गर्नु चाहन्थे। यसै उद्देश्यदेखि १८५७मा उदारदलीय डेनिश राजनीतिज्ञ सी. जी. आंड्रास र लण्डनका बैरिस्टर टामस हेरले यस प्रणालीको आविष्कार गरे। यस प्रणालीलाई ख्याति मिली किनभनें ब्रिटिश उदारतावादका बौद्धिक नेता जन स्टुअर्ट मिलले यस प्रणालीलाई स्वीकार गर्न लिया र १८६१मा प्रकाशित आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ "रिप्रेजहरूटेटिव गवर्नमाट" (प्रातिनिधिक शासन)मा यसमाथि विचार गरे।
इस प्रणालीका अन्तर्गत चाहे जति पनि सीटहरू हो मतदातालाई केवल एक नैं वोट प्राप्त हुन्छ। त्यो आशावारका नामका अघि १, २, ३, ४ आदि अंक लेखेर विभिन्न आशावारहरूका प्रति आफ्नो वरीयताको सङ्केत गर्दो आफ्नो वोट दिन सक्छ। यसलाई एक उदाहरणदेखि स्पष्ट गर्न दिनु ठीक हुनेछ। मान लीजिए कि एक चार सदस्यहरू वाला निर्वाचनक्षेत्र छ। यसमा कुल १२ हजार वोट पडे। डÜप कोटाका अनुसार जसलाई कमभन्दा कम २४०१ प्रथम वरीयताहरूका वोट प्राप्त हो जाऐं त्यसका निर्वाचित हो जाना निश्चित छ। अब मान लीजिए कि मैदानमा ९ आशावार छन् र यीबाट केवल दुइलाई नैं डÜप कोटा भन्दा अधिक मत मिल्दछन्- एकलाई २४५१ र अर्कालोई २४८१; बचे भए वोट शेष आशावारहरूमा बँट जान्छन्। प्रथम गणनामा उक्त दुइटै आशावार निर्वाचित घोषित गरिदिए जान्छन्। यसका पछि अर्को गणना हुनेछ। द्वितीय गणनामा न्यूनतम वोट प्राप्त गर्ने आशावारलाई मैदानदेखि हटा दिए जा सक्छ र निरस्त प्रत्याशीको द्वितीय वरीयताहरू तथा दुइटै विजयी प्रत्याशिहरूका अतिरिक्त मतपत्र शेष आशावारहरूलाई हस्तान्तंरित गर्न सकिन्छ। अर्को तरीका यो छ कि तिनको सबै मतदाताहरूको द्वितीय वरीयताहरू देख लिए जाऐं, शेष आशावारहरूमा देखि प्रत्येकलाई प्राप्त कुल वोट गिन लागि जाऐं र प्रत्येकलाई मिले कुल वोटको भाग दे दिए जाए। (अतिरिक्त वोट श्र् विजयी आशावारलाई मिले कुल वोट) यस प्रकार दुइटै आशावारहरूमा देखि जसलाई पनि डÜप कोटा मिल जाए त्यसलाई निर्वाचित घोषित गरिदिए जाए। वोटहरूको गणना यसै प्रकार तबसम्म चलती जाएगी जबसम्म सबै सीटहरूका लागि डÜप कोटा प्राप्त गर्ने आशावार न मिल जाऐं।
इसका उद्देश्य प्रत्येक वोटलाई एक मूल्य प्रदान गर्नु छ।
आयरल्यान्ड र टसमानियाका गणतन्त्रहरूमा मुख्य प्रातिनिधिक सभाका चुनावहरूका लागि यसै प्रणालीको उपयोग गरेरिएको छ। आस्ट्रेलिया र न्यू साउथवेल्सका द्वितीय सदनहरू (सेकंड चैंबर्स)का चुनावमा पनि यसको उपयोग हुन्छ। भारतमा पनि विधान परिषदहरू (उच्च सदनों)का सदस्यहरूका चुनावमा यही प्रणाली अपनायी जान्छ।
आनुपार्तिक प्रतिनिधित्वको यो अर्को प्रकार छ। यसका अन्तर्गत प्रत्येक मतदातादेखि भनिन्छ कि त्यो व्यक्तिगत आशावारहरूमा चुनाव न गरेर आशावारहरूको ती सूचिहरूमा चुनाव गरे जो विभिन्न दलहरू वा संघटनहरू द्वारा प्रस्तुत गरिएका हुन्।
बेलिजयममा १८९९मा यही तरीका अपनाइएको थियो। हाल्याण्ड डेन्मार्क, नार्वहरू, स्वीडन, फिनल्यान्ड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी र इटलीमा पनि यही तरीका प्रचलित छ।
इस प्रणालीका विभिन्न रूप हुन्छन्। यहाँ दुइ प्रमुख रूपहरूमा विचार गरिंदैछ। इनमध्येको एकलाई "सर्वोच्च औसत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व" भन्दछन्। बेलजियमका डी" हाँटले यसको उद्भावन गरेको थियो, यसै कारण यसलाई डी, हाँटको नियम पनि भन्दछन्।
सीटहरूको बटवारा एक-एक गरेर हुन्छ। यदि कुनै आशावारलाई सम्बन्धित सीट मिल गयी त प्रत्येक सीटका लागि प्राप्त सर्वाधिक औसत मतपत्र पानेवाला प्रत्येक आशावार सूचीमा स्थान पिन्छ। यस परिणामलाई प्राप्त गर्ने सूत्र यो छ कि प्रत्येक विनिधानका अवसरमा प्रत्येक सूचीका कुल आरम्भिक वोट तबसम्म प्राप्त सीटहरूको सङ्ख्यादेखि एक अधिक द्वारा विभक्त गरिदिए जान्छन्। प्रथम विनिधान (बंटवारा)का समय प्रत्येक सूचीका लागि विभाजक, हुन्छ। र यसै कारण सूचिहरूका आरम्भिक वोट नैं औसत हुन्छन्। द्वितीय विनिधानका समय विजयी सूचीको विभाजक २ हुनेछ जब कि शेषको विभाजक १ नैं रहन्छ। यसै प्रकार तेस्रो र चौथो विनिधानका समय पनि सीटहरूको बँटवारा गरिन्छ।
अर्को विधि "महत्तम शेष" द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व भन्दछन्। यसमा निर्वाचनलब्धिको हिसाब पडे भए कुल वोटहरूको सङ्ख्यालाई नियत सीटहरूको सङ्ख्यादेखि विभाजित गरेर लागेको लिइन्छ। फेरि प्रत्येक सूचीलाई त्यति नैं स्थान दे दिए जान्छन् जति बार उक्त लब्ध सङ्ख्या प्रत्येक सूचीमा आयी हुन्छ। यदि यसका पछि पनि केही सीटहरू बच जाती होउन् त तिनको विनिधान प्रत्येक सूचीका आंरभिक वोटहरूदेखि ती वोटहरू को, जसको लब्धि द्वारा कुनै एक वा अनेक सीटहरूलाई प्राप्त गर्नमा त्यो उपयोग गर्न चुकी छ, निकालेर बचे भए वोटहरूको सङ्ख्याका विस्तारका अनुसार आनुक्रमिक गतिदेखि गर्न दिइन्छ।
यी पनि दहरूखहरूसम्पादन
A New Nation Votes: American Elections Returns १७८७–१८२५
Electoral systems and the protection and participation of minorities, report by Minority Rights Group, २००६
A New Monotonic and Clone-Independent Single-Winner Election Method by Markus Schulze (mirror१, mirror२). Introduces the Schulze method and its use in the Debian project.
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=निर्वाचन_प्रणाली&oldid=998080" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३ मार्च २०२१, १६:५०
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:५०, ३ मार्च २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।